निर्देशक चाम्सले भने ‘बहिनी बनाउदा फापेन, गर्लफ्रेण्ड बनाउँछु’ – Bisal Chautari
निर्देशक चाम्सले भने ‘बहिनी बनाउदा फापेन, गर्लफ्रेण्ड बनाउँछु’
- २३ बैशाख २०७१, मंगलवार १७:५२ मा प्रकाशित
Hasiya – New Nepali Movie – Hema Shrestha – Milan Chams
काठमाडौं, २०७१, बैशाख, २३ मंगलवार । निर्देशक मिलन चाम्सले अहिले सम्म नेपाली कला क्षेत्रमा ४ वटी बहिनी बनाइसकेका छन् । तर यहि बहिनीहरुबाट आफ्नो साथ छाडेपछि भने सिनेमा नखेलाउँने मनसायमा पुगेका छन् ।
प्रसंग हो चलचित्र ‘हसिया’को आज मंगलवार काठमाडौमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनको । कार्यक्रममा बोल्दै चाम्सले भने– ‘चलचित्र ‘हसिया’ को अभिनेत्री प्रचार प्रसारमा नभएकाले आफुलाई एउटै प्रश्न अभिनेत्रीलाई कता गायब बनाएको ? भन्ने प्रश्नले मलाई हैरानी पारेको छ ।
तर मैले गायब बनाएको होइन । मलाई त अभिनेत्रीको अहिले अझ बढि मात्रामा आवश्यक रहेको छ । अभिनेत्री हेमा यतिबेला दुबइको इतिहादमा एयर होस्टेज बन्न तालिम लिइरहेकी छिन् । सिनेमामा पनि राम्रो काम गरिन्, तर चल्ने बेलामा चटक्कै छोडेर हिडिन्’, मिलनले गुनासो पोख्दै कार्यक्रममा बताए । कार्यक्रममै बोल्दै आफुले बनाएको ४ वटै बहिनीहरुले धोका दिएको चाम्सले बताए । दिदिहरुबाट चलचित्र क्षेत्रमा फाइदै भएपनि बहिनीहरुबाट भने सधै धोका भएकाले सिनेमामा अवको समयमा बहिनीलाई नलिने बताए । चाम्सले भने–‘अब चाही गर्लफ्रेण्ड बनाउँन पर्‍यो जस्तो छ ।’
कार्यक्रममा बेलायतमा आयोजना गरिएको प्रिमियरको भिडियोपनि प्रदर्शन गरिएको थियो । बेलायतमा गरिएको विभिन्न शोमा पुगेका दर्शकले ‘हँसिया’लाई खुबै मन पराएको निर्देशक चाम्सले बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै महा अभिनेता राजेश हमालले चलचित्र हसियाको प्रिमियर शो साच्चिकै सफल रुपले सम्पन्न भएको बताए । अभिनेता हमालले भने –‘उनीहरुले हलिउड सिनेमाको जस्तो लाग्ने एक्सन ‘हँसिया’मा भएको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए ।’
जेठ ९ गतेबाट देशभव्यापी प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र ‘हसिया’को बेलायत प्रिमियरकै सफल्ताले पुन: बेलायत शहरमा प्रर्दशन हुने चलचित्रका निर्देशक चाम्सले बताए । चलचित्र आउँदो मे ९मा युके, मे २३ मा नेपाल र युकेसंगसंगै, मे २५ मा हङकङमा प्रर्दशन हुदैछ ।
चलचित्रमा हेमा श्रेष्ठका अलवा राजेश हमाल, अनुप विक्रम शाहीको मुख्य भूमिका छ । एक्सन थ्रिलर सिनेमालाई दुर्गा घलेले निर्माण गरेकी हुन् । चलचित्रमा कल्याण सिंहको संगीत, रिनाशा राई वान्तवाको नृत्य, रामकुरमा उप्रेतीको छायांकन, राजकुमार उप्रेतीको एक्सन छ ।
Film Company – Chams Entertainment Pvt. Ltd.
Cast : Rajesh Hamal, Hema Shrestha, Anup Bikram Shahi, Bishal Dhungana, Alok Karki, Bijay Kunwar, Kiran Rai, Shishir Rana, Prashamsha Shah (Child Artist), Ruby Rana (Special Appearance)
Choreographer – Renasha Bantawa Rai
Editor – Arjun GC, Badri Lamichhane and Milan Chams
Director of Photography – Ram Kumar KC